News Collection: कतै पार्टीमा ढलेको देख्नुभा’छ ?
कतै पार्टीमा ढलेको देख्नुभा’छ ?
एक समय थियो जब मानिस नेपाल टेलिभिजनबाट शुक्रबार प्रसारण हुने हाँस्य शृङ्खला हिजोआजका कुरा हेर्नकै लागि दिन गनेर बस्थे । कार्यक्रमका निर्देशक, परिकल्पनाकार र अभिनेता सन्तोष पन्तको अभिनय कौशलबाट प्रभावित नहुने कमै थिए तर समय सधैँ कहाँ एकनासको हुन्छ र ! विविध कारणले यो कार्यक्रम प्रसारण हुन सकेन । अहिले फेरि उनी फरक च्यानलमा ‘हिजोआजका कुरा’ लिएर दर्शकमाझ आएका छन् ।
० दसैँको मौका छोपेर कार्यक्रम सुरु गर्नुभयो नि ?
- कान्तिपुर टेलिभिजनले अमेरिकालगायत विभिन्न ठाउँमा रिसर्च गरेर हिजोआजका कुराको डिमान्ड रहेको बतायो । यसपछि दसैँमा गर्दा नै राम्रो हुने भनेपछि यही बेला सुरु भयो । अनि दर्शकहरूलाई दसैँको शुभकामना पनि हो ।
० च्यानल त फेरियो नि ?
- सकेसम्म च्यानल फेर्ने इच्छा थिएन । पहिले पनि बोलाएको थियो, म गइनँ । मेरो मदर टेलिभिजन च्यानल नेपाल टेलिभिजन नै हो तर अहिले बेलुकाको सबै समय उसले बेचिसकेको रहेछ । अनि च्यानल फेरेर कार्यक्रम चलाउन पर्‍यो ।
० अहिलेसम्म कता हराउनुभएको ?
- कतै हराएको थिइनँ । यसबीचमा गुडबाई अस्ट्रेलिया चलचित्रको कामका लागि अस्ट्रेलिया गएँ । माटोले माग्दैन, आफैले दिनुपर्छ सेनाको कार्यक्रममा काम गरेँ ।
० चलचित्रमा पनि त्यति देखिनु भएन त ?
- कसैले अफर पनि गरेन ।
० हिजोआजका कुराले पहिले जस्तै क्रेज कायम गर्न सक्ला ?
- पहिले नेपाल टेलिभिजन एउटै मात्र थियो । अहिले थुप्रै च्यानल र प्रोग्रामहरू आइसकेका छन् । १५ वर्ष अघि र अहिले धेरै कुरामा फरक भइसकेको छ । तैपनि दर्शकलाई पहिले जस्तै शिक्षामूलक कार्यक्रम दिने प्रयास गर्छु ।
० सन्तोष पन्तको कार्यक्रममा गाली मात्रै हुन्छ, समस्याको समाधान नै हुँदैन भन्ने गुनासो सुनिन्छ नि !
- समाजमा भएका समस्याको समाधान पनि मेरो कार्यक्रममा हुन्छन् । बुझ्ने र नबुझ्ने आफ्नो कुरो हो ।
० तपाईंको धेरै पिउने बानी छ रे नि ?
- कतै लडेको देख्नुभा’छ वा पार्टीमा ढलेको देख्नुभा’छ । यस्तो कुरो कसले देख्यो उसलाई सोध्नुहोस् ।
० अवकास हुनेबेला ‘डबल’ बढुवा पाएको चर्चा खुब चल्यो, किन होला ?
- यो कुरो नबुझेर चलेको हो । नेपाली सेनामा प्राविधिक सुबेदारपछि बढुवा हुँदा प्राविधिक उपसेनानी नै हुन्छ । त्यसमाथि नेपाली सेनाले मलाई विशेष योगदान पुर्‍याएको भनेर यस्तो बढुवा दिएको हो । यो चर्चा खालि तिललाई पहाड बनाउने काम मात्रै हो ।